LALAN-TSAINA « ASA SY EZAKA » : Tafajoro ny klioba Fanoro ao Antsirabe – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:40
Lalan-tsaina entina hampandrosoana ny “Asa sy ezaka”.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/LALAN-TSAINA « ASA SY EZAKA » : Tafajoro ny klioba Fanoro ao Antsirabe
Mila manana tanora sahy mandray andraikitra, vonona hanampy tosika ny fampandrosoana ny firenena i Madagasikara, raha ny lahatenin’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina tany Antsirabe, ny farany herinandro lasa teo. Antony nijoroan’ny klioba Fanoro ny hametrahana ny lalan-tsaina « Asa sy ezaka » itondrana anjara biriky hampandrosoana ny tanindrazana iaraha-manana. Ankoatra ireo, tsy nohadinoina koa ny fanatontosana ny « Asa tagnamaro, andron’ny olom-pirenena » tany an-toerana. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 23 novembre 2020
Taorian’ny hetsika notontosaina tany amin’ny Manda Foulpointe, mahakasika ny fijoroan’ny Klioba Fanoro sy ny fampahafantarana ny lalan-tsaina « Asa sy Ezaka », nanohy ny fanentanana mifandraika momba izany, ny teo anivon’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, tao Antsirabe, ny sabotsy lasa teo. Ireo tanora no vondron’olona notilian’ny minisitera tao anatin’ny fanentanana. Antony, mba hananana zotom-po sy finiavana hioitra amin’ny fiainana amin’ny alalan’ny asa sy ny ezaka ataony manokana ireo tanora. « Mila manana tanora sahy mandray andraikitra, vonona hanampy tosika ny fampandrosoana ny Firenena i Madagasikara », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, nandritra ny kabariny teo anatrehan’ireo tanora marobe. Tsy navela nandalo fotsiny, araka izany, ny fotoana fa natsangana ny « klioba Fanoro » tao Antsirabe, ahafahan’ireo tanora mitondra ny anjara birikiny, hizara sy hampahafantatra ny lalan-tsaina entin’ny Fanoro. Nofaranana tamin’ny alalan’ny « Flash mob », fanentanana momba ny fandaharanasa “Asa sy Ezaka”.
Niverina indray ny « Tagnamaro, Andron’ny olom-pirenena »
Niara-nientana ny rehetra nandritra ny “Tagnamaro” teto amin’ny EPP Mahazoarivo I.
Ankoatra ny fijoroan’ny « Klioba Fanoro » tany an-drenivohitr’i Vakinankaratra, dia niverina indray ny « Tagnamaro, Andron’ny olom-pirenena », raha somary tsy nisy izany, nandritra ny fisian’ny « Hamehana ara-pahasalamana » teto amin’ny tany sy ny Firenena. Lalan-tsaina efa napetraky ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ny « Tagnamaro, Andron’ny olom-pirenena », ka ny EPP Mahazoarivo I no nanatontosana izany, ny farany herinandro lasa teo, tany Antsirabe. Nosafidiana manokana nanaovana ny « Tagnamaro » ny Sekoly ambaratonga fototra (EPP) Mahazoarivo I. Ity sekoly ity, izay tsy nisy fanamboarana an-taonan’ny maro, kanefa mandray mpianatra manovo fianarana hatramin’ny 700 isa mahery anatina taom-pianarana iray.
Niandraiketan’ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, manokana ny fitaovana rehetra, nentina hanatsarana sy hanavaozana ity sekoly ity. Nolokoina iray manontolo ny efitrano fianarana rehetra, na ny anatiny na ny ivelany, ankoatra ireo pitsopitsony samihafa ilaina amin’ny kalitaon’ny fenitry ny sekoly. Ankoatra ireo mpiara-miasa eo anivon’ny Minisitera foibe, nanampy tosika ary nandray anjara mavitrika tamin’ity « Tagnamaro » teto Antsirabe ity avokoa ireo rafitra samihafa, na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana. Nanolo-tanana nandritra ny hetsika ireo mpiasa teo anivon’ny Governoran’ny Faritra Vakinankaratra, ny Kaominina Ambonivohitra Antsirabe, ireo Fitaleavam-paritra eto Vakinankaratra, ireo mpitandro filaminana, ireo mpianatra avy amin’ny EPP manodidina, ireo mpilatsaka an-tsitrapo, ankoatra ireo olon-tsotra nandray anjara. Tafita, araka izany, ny hafatra sy ny lalan-tsaina raha ny fahavitrihana nasehon’ireo mpandray anjara rehetra.
Nitohy ny hetsika « ‘Ndao hamaky boky ankalamanjana »
Nahazo ny anjarany koa ireo tanora tamin’ny resaka vaky boky ankalamanjana.
Hetsika marolafy no notanterahina tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra ny farany herinandro lasa teo. Isan’ireny ny “Ndao hamaky boky ankalamanjana”. Amin’ny maha hetsika hanomezan-danja ny fanentanana ny zaza, ny tanora sy ny vondron’olona tsy ankanavaka, hazoto sy hankafy ny vaky boky azy izay. Nametraka vina sy tanjona ary paikady ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny hitety toerana maro, hameloma-maso izay lalan-tsaina izay. Nambaran’ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, fa « manana ny toerany manokana amin’ny fandrantoana fahalalana ny famakiana boky, indrindra ho an’ny kilonga mpianatra sy ny tanora ». Vory lanona teo anoloan’ny Gare Antsirabe ireo kilonga sy tanora maro, niaraka tamin-dRamatoa Minisitra, nanatanteraka ny fanombohana ny hetsika, izay narahina fifampizarana koa. Anisan’ny niara-niasa tamin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, amin’ny alalan’ny Tranombokim-pirenena, nandritra ny hetsika « Ndao hamaky boky ankalamanjana », raha ny tao Antsirabe, ny Alliance Française, ny Bibliothèque Chretienne ary ny Centre Culturel Saint Paul.